Maqaayad qarash cuntadeeda lagu bixiyo qashinka bedelkii lacagta! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Maqaayad qarash cuntadeeda lagu bixiyo qashinka bedelkii lacagta!
Muqdisho – Maqaayad aan caadi ahayn oo ku taalla Semarang, dalka Induniisiya waxay ku jirtaa howl-gal ay dadka xaafadda oo faqrigu la fadhiistay ku caawinayso – kuwaas oo badigood lacag dhan 25$ bishiiba ku shaqeeya – iyada oo siinaysa hab ay cunto ku heli karaan.
Methane Gas Canteen waxaa socodsiiya sey iyo afadiis – Sarimin iyo Suyatmi, waxay ku taalla meel dadka cunnatiga ah aysan ka filan karin. Waana goobta qashinka lagu shubo ee Jatibarang, bartamaha Java. Goobtan waa meel lagu daadiyo qashinka halkaas oo danyartu ay ka ururiyaan walxaha dib loo adeegsan karo si ay uga ganacsadaan. Jeer iyo markaas, lamaanaha oo muddo 40 sano ah ku bixiyay ururinta qashinka kahor inta aysan furin maqaayadda, waxay ku mashquulsan yihiin cunno karinta.
Tani waxay maqaayadda ka dhigtay mid aan caadi ahayn oo marka laga soo tago kobta ay ku taallo, aan kaaga baahnayn lacag aad iska bixiso raashiinka lagu siiyo. Danyartu waxay doorasho u leeyihiin inay qashinka ay ururiyeen iskaga bixiyaan raashiinka. Saramin, oo 56-jir ah, wuxuu miisaamaa qashinka loo keeno: kadibna wuxuu ku qiimeeyaa lacagta ay la’eg tahay.
Qorshahani waa qeyb kamid ah xal looga golleeyahay in lagu yareeyo qashinka.
Maqaayadda waxaa markiiba fadhiisan kara 30 qof waxayna qiimo u dhaxeeya 0.40$-0.80$ ku cuni karaan raashiinka la kariyo oo ay ku jiraan bariis, qudaar, kalluun iyo ukun duban iyo in kale.
Taniyo markii ay fureen mashruuca, labaduba – Sarimini iyo Suyatma – wuxuu dakhligooda maalinle sare u kacay 15$ maalintiiba marka lala barbar-dhigo xilli ay qashinka ururin jireen.
Agus Junaedi, oo ah maareeyihii hore ee Jatibarang Landfill ayaa la yimid fikradda maqaayaddan sanadkii 2014-ka markii maayarka Semarang uu amray inuu hoos u dhigo qashinka lagu daadiyo goobta. 40% sideeda boqol ee tan oo qashinka ah kuwaas oo maalin walba lagu soo shubo halkan waxay isugu jiraan balaastic iyo wixii lamid ah.
Junaedi wuxuu sheegay inay doonayaan bedelista aragtida qashinka laga heysto. Rajadiisu waa in dadku ugu danbayn ay la qabsan doonaan dib u adeegsiga qashinka iyo in hoos loo dhimo tirada qashinka oo maalin walba lagu soo shubo goobaha qashinka.
“Waan ku faraxsanahay in shacbigeennu ku raaxaysanayaan cunnadeenna,” ayuu u sheegay NHK World. “Saboolku waa inuu sidoo kale helaa xaqa ah inuu cunno macaan ku noolaado. Waxaana doonayaa inaan fursaddaas siiyo inta aan awoodi karo.”
Previous: Willian oo lala xiriirinayo Manchester United.
Next: Sheekada Mohamed Bzeek – Xanaaneeyaha Carruurta laga quustay noloshooda!